संविधान, सिमांकन र पहिचान – Gulmiews
संविधान, सिमांकन र पहिचान
August 28, 2015 Raju Gautam
No comments	विष्णु घर्ती “भनभनेली”,
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पाल्पा
नेपाली जनतालाई आम परिवर्तनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप नयाँ संविधान सहमतीका साथमा जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटीरहेको स्थिति छ । देश बनाउने नाममा संविधान फेर्ने¸ संविधान फेर्ने नाममा सिमाना हेरफेर गर्ने र सिमाना हेरफेर गर्ने नाममा पहिचानका विषयलाई उराल्नेजस्ता अनेकन खालका गतिविधिका हामी साक्षी किनाराका रोहवर लगातार भइरहेकै छौं । अब साच्चिकै रुपमा देशलाई परिवर्तनको मार्गमा गतिशील बनाउने हो भने पहिचान¸ सिमाना तथा संविधान र अन्य यस्तै विषयमा मात्र केन्द्रित भएर दिन विताउनुको कुनै पनि औचित्य देखिदै देखिन्न।
संविधानलाई राज्य सञ्चालनको मियोको रुपमा विश्वभर नै मानिएको छ । संविधान संक्षिप्त तर सारभूत रुपमा सबैलाई समेटिएको कानुनहरुको पनि कानुन हो । यसैबाट देशको मुहार फेर्ने मुहानको पहिचान हुन्छ । अरुसँग सिमाना कोर्ने सूचकहरुको विकास हुन्छ । देशको मुहार फेर्दा जनताको मुहार मलिन पक्कै रहन्न नै । जनताको मुहारमा मुस्कान आउनु देश अधोगतितर्फ लाग्ने संकेत पक्कै होइन । देश निर्माणको मुहानको पहिचान गर्नेतिर नलागेर चुहान गर्ने र सोही चुहानबाट आफ्ना सिमित स्वार्थको परिपूर्तिमा तल्लिन भइरहने अघोषित संस्कृतिले जरा गाडेको छ । यस्ता जराहरु आजका दिनमा आफैले उखेल्ने पर्यत्न गरिरहेको पाइन्छ । अरुले उखेल्दा र आफूले उखेल्दाको विचार र विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसैले संविधान निर्माणमा ढिलाई भएको मात्र होइन अन्योलता समेत छताछुल्ल भइरहेको पनि छ । साराका सपनाहरुको साकार रुप प्रदान गर्ने संगालो संविधान भएको हुँदा सदावहार रहने सदासयताका साथमा बन्नुको विकल्प अबका दिनामा छदै छैन ।
सिमांकनः सिमाना चाहे सानो होस् वा ठूलो¸ चाहे स्थानीय होस् वा राष्ट्रिय¸ अन्तराष्ट्रिय जे सुकै होस् र जस्तो सुकै किन नहोस् हरेक तह र तप्कामा स्पष्ट रुपमा सिमा कोरिएकै हुनु पर्दछ । नयाँ सिमाना निर्माणमा पनि कम भन्दा कम विवाद आउने गरी समाधानतर्फ उन्मुख भइ काम सुचारु गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै पक्षले संयंमता¸ धैर्यता र सकारात्मक सोंचका साथ अगाडि लम्कनु पर्दछ । संविधानमा जुन प्रकारले सिमांकनको चर्चा मात्र नभई बडो उचाइका साथ उछालिएको विषय छ¸ त्यसले प्रकारान्तरमा गएर परस्पर खालका समस्याहरु उत्पन्न गरिरहने स्थिति देखिएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको नव संरचनाको जुन प्रक्रिया अपनाइदै छ¸ त्यसमा सिमांकनको सन्दर्भ धेरै पहिले देखि नै निरन्तरको वहसको विषय बनेको स्थित हो । उहिले ८ सय जिल्लाको कुरा हाम्रै सामु आएकै हव । नगरपालिकाका सिमानाहरु कोरिएका कोरिएकै छन् । गाविसहरु गाभिनका लागि उत्प्रेरित गरिदैछ । संघीयताका अंशहरु लगाउदै जाँदा एकबिसभन्दा कम संख्याका प्रत्येक अंकहरुमा रात दिनजसो चर्काचर्की हुदै मारामारसमेत मच्चीरहेको छ । संघहरुको सिमांकन अहिले आएर गरुँ कि नगरुँ भन्नेमा अल्झिरहेको छ । जनताको राय बुझ्न जानुभन्दा अगाडि आयोगबाट सिमांकन र नामांकन तोक्नको लागि भएको सहमती केही मात्रामा भए पनि दीर्घकालीन हो कि भन्ने पनि चर्चा चलेको पाइन्छ । सर्वमान्य सिमांकनको खोजी आफैबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । तर नाम मात्रको आफैबाट हुन थाल्दा यो परिस्थितिको सिर्जना भयो कि भन्ने भनाइहरु पनि सुन्न पाइन्छन् ।
पहिचानः जो जसलाई पनि चिन्ने र चिनाउने काम जरुरी छ । म “विष्णु भनभनेली” हो भनी चिनाउन निर्वाध रुपमा मैले पाउनु पर्दछ । तर “विष्णु भनभनेली” भन्दा नाक खुम्च्याउने¸ मुख लेप्रेयाउने र मुन्टो बटार्ने बनाउनु मेरो धर्म¸ दायित्व र कर्तव्य पनि होइन । “विष्णु भनभनेली” भन्दा गैर भनभनेलीलेसमेत गौरव गर्न सक्ने विशेषताहरुको निर्माण गरिरहनु मेरो दैनिक कार्य हो । र सोही रुपमा चिन्तन मनन गरिरहनु अर्को महत्वपूर्ण पाटो समेत हो भनी सम्झिरहनु पर्दछ । भनभनेली भएकाको लागि बनेका विशेषताहरुको संरक्षण¸ प्रवर्धन तथा उचित खालको स्थान दिने जिम्मेवारी भनभनेलीकै हो भने भनभनेली हुनका लागि बन्ने विशेषता र विषयमा केन्द्रित हुनु¸ तिनीहरुलाई उजिल्ल्याउनु र फैलाउनु पनि उनीहरुकै धर्म हो ।
बनेका पहिचानको निमिट्यान्न पार्नु कसैको पनि भलोको विषय हुन सक्दैन । कुभलो चिताउनेहरुको भलो भएको इतिहास दीर्घकालीन बनेको कतै पनि देख्न सकिदैन । आफ्नो बचाउनका लागि अरुमाथी कुलो लगाउनेहरुमाथी भेलले कहिल्यै छोडेको छैन । यसरी पहिचानका नाममा लड्ने¸ लडाउने र रमिता हेर्ने जो कसैको पनि पहिचान सधै कायम रहन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्र रहे राष्ट्रियताको पहिचान बनाउन केही गाह्रो छैन । भनभने रहे भनभनेली बन्नलाई केको चिन्ता¸ केको पीर < पद्धतिका आधारमा चल्ने परिपाटीको अवलम्वन नहुँदासम्म राज्य सञ्चालनका धेरै चरणमा पहिचानका मुद्धाहरु मुखरित भइरहने परिस्थिति आइरहने निश्चत पनि हो भन्न सकिन्छ । पहिचानहरु हिजोका मात्रै होइनन् र छैनन् पनि । आज पनि बनिरहेका छन् । जसरी हिजोका पहिचानहरुको महत्त्व आज बढीरहेको छ¸ त्यसैगरी आज बन्दै गरेका पहिचानहरु भोलिका दिनहरुमा अझ वलवान हुने विषयमा कुनै प्रकारको दुई मत हुनै सक्तैन । आफ्नो आफ्नो पहिचान जरुरी छ । पहिचानहरुको पनि महापहिचान बनाउनु हामी सबैको आजको सामुहिक दायित्व हो । सबैले सबैलाई सकार्नु पहिचानहरुलाई सपार्नु पनि हो ।
आगामी कदमहरुः राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तित उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता हो । आवश्यकताको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थको हावी भएको महशुस धेरैमा छाएको पाइन्छ । यस्तो खालको सन्देश फैलनु देश बनाउन कस्सिएकाहरुका लागि पक्कै पनि शोभनीय होइन । सामुहिक सद्भावका साथमा समग्र समाजको समृद्धिको लागि व्यक्तिगत स्वार्थको तिलाञ्जली दिन सक्नु सच्चा रुपमा परिवर्तित उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु आजको खास आवश्यकता हो भनी जनताले बुझेका छन् । यी सबैका लागि समयमै संविधान¸ उचित सिमांकन र वास्तविक पहिचान कायम रहिरहोस् । उन्नती¸ प्रगति समान रुपमा होस् । सिमांकन सामिप्यताको सूचक बनोस् । संविधान कसैको होइन¸ सबैको बनोस् । पहिचान बोझिलो होइन¸ पारिलो बनोस्।
Related Posts	राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ?...	September 14, 2016	मिसन जिबी रोड “रातो लाईटको, कालो कहानी”...	July 30, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ)